Kubonakala ngathi abantu banengxaki ngokwengqondo ngokwaneleyo, ukuze kubonakale ezintsha. Siye sasiqhelisela ukunyamezela rhoqo, ukwahlula kwabantu kwiibhokhwe kunye ne-larks, kunye nokugembula kunye ne-intanethi. Kodwa kwakubonakala kuncinane kwimvelo kwaye oku, kwikhulu lama-21, isifo esitsha savela - shoppingomania. Ngokuphindaphindiweyo amadoda namabhinqa baqala ukuphendukela kwiingcali zengqondo, abangenako ukuhamba ngokukhawuleza ngeefestile zevenkile, baze bangene ngaphakathi, baphume, baphonce phantsi kobunzima beengubo ezintsha kunye ezingenasidingo. Kunzima ukulwa nale ngqungquthela, kodwa kusenokwenzeka.
Izinto ezintsha zihlala zibiza ixabiso elifanelekileyo lemali, ingakumbi ukuba utshintshe i-wardrobe ngokupheleleyo. Akuyena wonke umntu onokuziqhayisa ngemali engenayo, okuvumela ukuba uchithe imali ephezulu kwiimpahla kunye nezixhobo. Uninzi lwe-shopaholics luthenga izinto ngeyona mali eninzi kunokuba izuze. Ngoko ke, enye ingxaki idibene kwiimatyala, ukubolekwa kwemali mboleko kwaye, ngenxa yoko, uxinzelelo. Indlela yodwa ephuma kule meko ayikuthi ithwale amakhadi ekweretheni, ukuba ube nemali eyaneleyo enokukwazi ukuyisebenzisa. Ukunikezela ngemali mboleko kuze kube ngoko. Kuze kubekho ukuhlawulwa kwamatyala.
Kuyaziwa ukuba indlela esibukeka ngayo ichaphazela oku. njengoko sibona abanye. Izambatho enye yeendlela zokubonisa intle yakho, umlingiswa kunye nenzuzo. Amantombazana amancinci amaninzi alwela zonke iindleko zokuthenga izinto ezibiza kakhulu kwiirhwebo ezidumileyo. Kodwa yiyiphi ipesenti yabantu abakungeze bayayixabisa udumo lweengubo zokugqoka okanye iingubo, ukuba ababhali igama lakhe ngeencwadi ezinkulu? Ngaba abahlobo bakho banomdla ukuba ngubani umbhali wengubo yakho okanye isikhwama? Ukuba awuhlali kwindawo ehamba phambili yenkampani enkulu, kodwa nje umfundi eyunivesithi, izinto eziyizinto ezizenziweyo azibalulekanga kuwe njengoko kubonakala ngathi. Ekugqibeleni, abo banokukwazi ukuzithengisa, abasayi kuwuxabisa imizamo yenu - ngokuba wena isikhwama saseGucci yimpumelelo, kunye nabo-isenzo.
Ukuthengwa kwengqondo kubonakala ngokubanzi kubasetyhini, nangona kukho amadoda-shopaholics. Ngokuqhelekileyo kubonakala kubantu abanengxaki enjalo, ukuba, xa bathenga ingubo entsha, baya kudibana ngokukhawuleza nothando lobomi babo okanye, ubuncinane, banokuqwalaselwa kumntu onomdla. Ewe, izinto ezitsha ebusweni bethu, zisenza sikwazi ukuzithemba ngakumbi, kwaye ukuzithemba kwanoma ubani kubangela ukuba kube mnandi. Ukuba ukholelwa kuwe ngaphandle kokubhengeza kunye neempendulo zamagama kwizihlangu ezintsha okanye i-suit, umphumo uya kufana, ngaphandle kokuchitha imali eyongezelelweyo.
Ubuninzi bokuthengwa kudla ngokudibanisa nelokuba abantu bayakhawuleza kwiivenkile. Oku kufuthi kwenzeka ngexesha lokuthengisa okanye ukuba umntu uya ezithengisayo phakathi kweentlanganiso ezibalulekileyo ezibini, ekupheleni komsebenzi. Ngoko ke, umgaqo wegolide kulabo abafuna ukulahla umkhuba onobungozi wokuthenga yonke into efika kwamehlo abo kukuya kuthengwa kuphela xa unokufumana ixesha lokukhulula. Qiniseka ukuba uzame ezintweni ngaphambi kokuba uthenge. Kulo gumbi lokugqoka ngokukhawuleza kuvela ukuba le nto okanye loo nto kwi-dummy ibonakala ngcono kunoko.
Kodwa nokuba le nto ihleli ngokugqibeleleyo, musa ukukhawuleza ukuthenga. Shiya into esitolo, wenze isigqibo malunga nokuthenga ekuseni. Kusenokwenzeka ukuba ngokukhawuleza xa ushiya ivenkile, lowo uthandayo uya kubonakala ungakhange ukhange kwaye uyimfuneko.
I-Shoppigognomy ayibonakali ngokucacileyo ukuba unokuqonda ngokucacileyo ukuba sele ufuna uncedo. Ngokuqhelekileyo abantu bayabhala ukuthanda kwabo ukuthenga uxinzelelo, bathetha ukuyothenga indlela ephela eyinceda ukuphumla nokuvuyisa. Ukuba uqaphela ukuba ukhawuleza kwiivenkile kuwo onke amathuba, emva koko ngokufanayo okanye okuphambene nesitayela kubonakala kwiikhabhinethi zakho, ongazange uzigqobe kwaye ungayisebenzisi, ke sekuyisikhathi sokucinga. Ukuphuma ukuya kwisitoreji, yenza uludwe lokuthenga uze ululandele ngokucacileyo. Ukuba ufuna ukuthenga into entsha, ukhethe ngokucophelela, ungathengi okokuqala kukubamba isohlo lakho. Yaye ungalibali - izinto zisixhasa nje kuphela, azenze siphi na into engcono, kwaye ayikho into enomdla.
Umdlalo ekuphambeni: i-suit-skirt suit - indlela entsha yefashoni
Imfashini kubantu: i-hoodie-i-spring trend-2016
Abafazi abasebenzisa imodeli kunye neebhokhwe zamadoda, iAntumn-Winter 2015-2016
Umbukiso weProjekthi yeMoussa - ukulungelelaniswa phakathi kweenkanuko kunye namathuba
Imfashini kunye nozuko: khetha imodeli efanelekileyo yokugqoka kunye neLamoda
Ndingayiqonda njani indoda ethandekayo?
Isaladi ye "Bukovina"
Thrush, unyango lwe-thrush
Indlela yokuchitha iqela elingalibalekiyo leendwendwe
I-lipolise i-AQP - ukulahleka kwesisindo esisebenzayo
Iimpawu zesifo somhlaza we-zodiac
Indlela yokukhawuleza ukukrazula iimpawu zokuqala zokubanda kunye nezilwanyana zamalungu
Ungasusa njani iilebe ekhaya?